Eurofighter duufaanka sano 3 4 bilood ka hor #388
Ku mahadsan tahay in aad heshay: 19
Pride of isbahaysiga NATO oo kale!
Eurofighter duufaanka waa mataano-engine, garabka canard-Delta, dagaalka ah multirole   duufaanka ayaa waxaa loogu tala galay iyo waxaa soo saaray by dallad ka kooban saddex shirkadood., EAD, Alenia Aeronautica iyo BAE Systems, kuwaas oo intooda badan u qabtaan arrimaha qabashada mashruuca iyada oo shirkada si wadajir ah ay u xajiyaan, Eurofighter Jagdflugzeug GmbH, kaas oo la asaasay 1986. Mashruuca waxaa maamula NATO Eurofighter iyo Tornado Management Agency, taas oo sidoo kale u dhaqmo sida macaamiisha Ra'iisul. 
Horumarinta ee diyaaradda ku ool bilaabay in 1983 la barnaamijka Future Yurub Fighter Diyaaradaha, a dadaal iskaashi caalamiga ah ee u dhexeeya Germany, France, UK, Italy iyo Spain. Sababo la xiriira khilaafka ka badan amar design iyo shuruudaha u howlgasho, France tagay dallad ay u madax bannaan horumariyo Rafale Jouse halkii. Diyaarad A technology bandhig, Aerospace British ah EAP, marka hore qaaday horyaalka on 6 August 1986; noocooda hore ee Eurofighter ku dhameystiri sameeyey duulimaadkeedii ugu horeeyay on 27 March 1994. Magaca diyaaradda, duufaanka, waxaa si rasmi ah u ansixiyay in September 1998; heshiisyada wax soo saarka ugu horeysay lagu saxiixay isla sannaddaas.
arrimaha Siyaasadda ee quruumaha lamaanahaaga si weyn u daba horumarinta duufaanka ayaa ah; dhamaadka lama filaan ah Dagaalkii Qaboobaa hoos baahida Yurub ee diyaaradaha dagaalka, oo waxaa jiray dood badan share qiimaha iyo shaqada Eurofighter ah. Duufaanka ayaa la soo bandhigay galay adeega shaqeeya 2003. Currently, nooca uu galay adeega la Air Force ee Austria, Air Force Talyaaniga, Air Force Jarmal ah, Air Force Royal ah, Air Force Isbaanish ah, iyo Saudi Air Force Royal ah. Air Force Royal ee Cumaan ayaa sidoo kale xaqiijiyay sida macaamiisha dhoofinta ah, taasoo tirada guud iibsiga diyaarad 571 sida 2013.
Eurofighter Jagdflugzeug GmbH (English: Eurofighter Fighter diyaaradaha GmbH) waa shirkad caalamiga ah in wada-xidhiidhinaysa ah design, wax soo saarka iyo kor of duufaanka Eurofighter ah, waxaa ka mid ah daraysa matoorada diyaaradaha ee loogu tala galay iyo soo saaray by EuroJet Turbo GmbH.
Aasaasay sannadkii 1986, [yeerida loo baahan yahay] waxa uu leeyahay xafiiska madaxa ay Hallbergmoos, Bavaria, Germany  Shirkadda waxaa iska leh shirkadaha waaweyn aerospace oo ka mid ah afar quruumaha lamaanahaaga Eurofighter.:
33% EAD Deutschland GmbH (Germany)
13% EAD CASA (Spain)
33%: BAE Systems (United Kingdom)
21%: Alenia Aermacchi (Italy)
Austria Air Force - 15 dhiibeen 
Jarmal Air Force -. 143 amartay, kuwaas oo 100 ayaa samatabbixi sida of February 2013 
Air Force Talyaani - 96 amartay, kuwaas oo 62 ayaa samatabbixi sida of May 2012, 
20º Gruppo Caccia OCU Tactical tababar tijaabo iyo qiimayn 
Royal Air Force Saudi -. 72 amartay, kuwaas oo 24 ayaa samatabbixi sida of April 2013 
Air Force Spanish -. 73 amartay, kuwaas oo 45 ayaa dhiibeen 
Ala 11, Seville-xikmad Air Base
111 Hawleed Qiimeynta 
113 Qiimeynta, tababarka pilot OCU Tactical iyo qiimeynta 
142 Hawleed Qiimeynta 
Royal Air Force - 160 amartay, [yeerida loo baahan yahay] kuwaas oo 100 ayaa samatabbixi sida of January 2013  
RAF Coningsby, Lincolnshire, England.
No. 3 Qiimeynta RAF 
No. 11 Qiimeynta RAF 
No. 29 Qiimeynta RAF OCU Tactical tababar tijaabo iyo qiimayn 
No. 41 Qiimeynta RAF Test & Qiimeyn Qiimeynta 
RAF Leuchars, Fife, Scotland.
No. 1 Qiimeynta RAF 
No. 6 Qiimeynta RAF 
No. 1435 Flight RAF (Falkland Islands) 
No. 17 Qiimeynta RAF OCU Tactical tababar tijaabo iyo qiimayn 
Royal Air Force ee Cumaan -. 12 amartay 
Eurofighter duufaanka sano 3 4 bilood ka hor #390
Taasi waa a jet dagaalka wanaagsan laakiin waxaan samayn sida Rafale Jouse dheeraad ah.
Eurofighter duufaanka sano 3 4 bilood ka hor #391
Good for aad Janne!
Duuliyay ka Jouse / FA10, FA20, waxyaabaha FA50 ee mustaqbalkeyga ciyaareed & raacsan ay yihiin mashiinada weyn.
Eurofighter duufaanka vs Jouse Rafale.
Laba diyaaradood oo dagaal aad u wareersan, waayo, dad badan. video Tani tusi doonaa faraqa u dhexeeya labada diyaarada.
Eurofighter la sameeyey by UK, Germany, Spain iyo Italy. Halkee sida Rafale lagu sameeyaa France.
video Tani waxay muujinaysaa dhinacyada badan ee labada diyaaradood. Si loo caddeeyo doonaa wax kasta oo mad ku saabsan diyaarad this.
Shifo & qaad On Gentelmen!
Eurofighter duufaanka vs Jouse Rafale
Eurofighter duufaanka sano 3 3 bilood ka hor #447
runti duulimaadkiisu aad ayuu ufiican yahay oo loo isticmaali karo dhamaan wadamada iyo xitaa gudaha fsx/fsx se /p3d sidoo kale :)
Time si ay u abuuraan page: seconds 0.275